Saddex bilood ka hor waxa ay kabalyeeri ka aheyd makhaayad ku taallo magaalada New York City……. | STN Somali
Home Khaas Saddex bilood ka hor waxa ay kabalyeeri ka aheyd makhaayad ku taallo...
Saddex bilood ka hor waxa ay kabalyeeri ka aheyd makhaayad ku taallo magaalada New York City…….
Alexandra Ocacio-Cortez ayaa caan ka noqotay dalka Mareykanka, kaliya hadii aad ku dhawaaqdo sadax xaraf ee ugu horreysa magaceeda “AOC” waa la garan.
waxay noqotay xiddigta ugu caansan ee Washington, magaceeda oo la sheego waxuu argaggax geliyaa siyaasiyiin badan oo mareykan ah kana tirsan labada xisbi ee ugu waaweyn wadanka Mareykanka-Jamhuuriga iyo Dimuqoraadiga.
Inkastoo jir ahaan ay tahay caato balse gabadhaani miisaankeeda siyaasadeed ayaa waxuu noqday mid aad u culus kadib markii ay go’aansatay in ay ka riixato kuraasta raggii siyaasadda Mareykanka geed fadhiga u ahaan jiray.
iyadoon lacag heysan, xayeysiinna sameysan ayey gashay doorashadii Kongareeska Mareykanka, waxay kula tartantay kursiga Xildhibaanimo mid ka mid musharaxa ugu xoogga badan ee xisbiga Jamhuuriga.
waxay is bartay bulshadii, kaligeed ayaana garaacday albaabadaasi, waxayna ka dhaadhicisay bulshada barnaamijkeedii siyaasadeed, kadibna waxay gaartay guul lama filaan ah.
xamaasadii iyo dareen dhalinyaranimo oo isbadal doonka ah ayay kusoo gashay saaxada doorashada. waxii maskaxdeeda ka guuxayo si cad oo kalsooni ku dheehan ayey u sheegtaa, waxaana hal-ku-dhiggeeda halbeeg u ah “mustaqbalka annagaa leh, waan ka daalnay sugitaanka isbadal!”
Maxaa sheekadeeda xiiso u yeelaya?!
Alexandra waa 28 sano jir, Waxay ka qalinjabisay Jaamacadda Boston, balse waxaa duruufta ku qasabtay in ay kabalyeeri ka noqoto mukhaayad si ay isaga bixiso kharashaadka ku baxay daaweynta hooyadeed iyo qaamo kale oo jaamacadda looga lahaa.
Maanta waxay hormuud rajo u tahay dhalinyara badan oo iyada la mid ah oo isbadal doon ahaa kadib markii ay arkeen in kuraasta siyaasada ay isku badbadalaan kaliya inta jeeb waynta ka ah dalkooda.
Waxay keentay dabeyl isbadal oo xooogan. Maalin kasta waxaa la jebiyaa mid ka mid ah sanamya siyaaasadeed oo cusub kaas oo markii hore lama taabtaan ahaa, Sida Xidhiidhka u dhexeeya Ameerika iyo Israel, nidaamka caymiska guud, arimaha hubka, xuquuqda soogalootiga iyo deynta ardayda ee waxbarashada jaamacadeed.
Arrimahan ayaa ahaa kuwo marna aan lagu dhiirran karin in laga hadlo, dadkii isku dayay inay ka hadlaan oo ka waaweynaa ayaa horey dhulka lala gooyey balse iyada dhag uma dhigin arrinkaas.
waxay gaartay heer uu Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu qayb ka mid ah khudbadahiisii uu ku weeraray iyada, isagoo ku eedeynayo inay tahay haweeney Shuuci, Hanti-wadaag, kuna goodinaayo in dalkiisa uusan u ogolaaneynin inuu u jeesto dhanka hanti-wadaaga wax walba oo ay ku qaadato.
Warbaahinada wararka ee ugu wayn dalkaas (Fox News) iyo tobanan idaacada ah ayaa si joogta ah looga weeraraa si loo magac dilo, loona yareeyo hamigeeda.
“Waan qoslaa oo waxaan ku faraxsanahay weerarrada isdaba jooga ah ayey tiri mar la weydiiyey dhaliilaha loo soo jeediyo, waxa ay sii raacisay waxay u muuqdaan kuwa i dhaliilayo inaan argaggax geliyey quluubtoodii, hadda way gariirayaan balse aniga Waan soo socdaa waxba la igama qaban karo”. Ayaa laga soo xigtay……..Kacdoonka dhallinta waa Hanti.
W/Q: C/qadir Kuul.
Afeef: Aragtida qoraalkan waxa ay ku gaar tahay qofka ku saxiixan, kamana tarjumeyso tan STN TV, waa mareeg u furan qof kasta inuu ku gudbiyo ra’yigiisa saliimka ah. Kusoo dir qoraaladaada Email:info@stnsomali.com
Previous articleAmisom oo qaraxyo lagula eegtay nawaaxiga Warshadii hore ee Baastada
Next articleSoomaaliya iyo Kenya oo ku heshiiyay in la xoojiyo xiriirka diblomaasiyeed ee labada dal
Daraasad Cusub: qofka dheer oo u nugul xanuunka kansarka.
(DARAASAD): Maxay yihiin halisaha khuurada!?
Masar: Maxaa keenay in la xiro qoraagii kitaabka (Masar ma dal sabool ah baa?)